Amava e-Oxiracetam: I-Oxiracetam Powder indenza ndive njani?
Amava e-oxiracetam: I-oxiracetam powder indenza ndizive njani?
I-Oxiracetam yenye ye-nootropic endala nezongezo ukusuka kusapho lwe-racetam. Kwakuyicandelo lesithathu le-racetam emva kwepiracetam kunye ne-aniracetam kwaye yaqala ukuphuhliswa kwii-1970s. I-Oxiracetam sisiphumo esivela kwimichiza ye-racetam yoqobo, ipiracetam.
Njengamanye ama-racetam, i-oxiracetam iqulethe i-pyrrolidone kwisiseko sayo. Nangona kunjalo, i-oxiracetam ineqela le-hydroxyl, yiyo loo nto inamandla ngakumbi kunombumba wabazali, ipiracetam.
Kuyaziwa ngokuba nakho ukuphucula umsebenzi wokuqonda onjengememori, ukugxila kunye nokufunda kunye neziphumo ezikhuthazayo ezinikwayo. I-oxiracetam nootropics ngokubanzi ikhulisa impilo yakho yobuchopho.
I-Oxiracetam powder: Yintoni i-Oxiracetam esetyenziselwa yona?
Kukho uluhlu olubanzi lwe-oxiracetam esetyenzisiweyo exelwe ngabaphandi kunye namava e-oxiracetam ekwabelwana ngawo kumaqonga awahlukeneyo.
I-Oxiracetam, njengayo nayiphi na enye i-racetam, isetyenziselwa ukukhulisa ukuqonda ngokuphucula amandla okwenza imemori yexesha elifutshane kunye nexesha elide. Kungoko isetyenziswa nangubani na ofuna ukufunda nokukhumbula ulwazi. Ilunge kakhulu kubafundi abafuna ukugqwesa kwiimviwo zabo, njengoko izakuhamba indlela ende ekubancedeni bafunde kwaye bakhumbule izixhobo ngokulula. Ikwanceda ukuba bagxile kwaye bagcine ixesha elide.
Ukusetyenziswa kwe-Oxiracetam yahlukile kuba ibonelela ngokwandiswa kokuqonda ngelixa ivuselela ingqondo yakho ukuba igcine ukugxila kunye nokulumkisa. Eyona nto intle malunga neziphumo zayo ezikhuthazayo kukuba ngokungafaniyo nezinye izinto ezikhuthazayo ezishiya imvakalelo inye kwaye ingenaxhala, i-oxiracetam iya kuvuselela ingqondo kwaye ikushiye uzolile kwaye ukhululekile. Kubasebenzi abafuna ngenene ukugxila kunye nokugxila, amava e-oxiracetam akuthandabuzeki.
Uphando lukwabonisa ukusetyenziswa kwe-oxiracetam kunyango lokuhla kwengqondo kubandakanya ukwehla kwememori kwizigulana ezinesifo se-Alzheimer ngokubonelela ngokhuseleko lwe-neuronal.
Xa umzekelo umntu elungiselela udliwanondlebe, kubalulekile ukuba ubonakale ulumkile. I-Oxiracetam iphucula ukuthetha ngokutyibilikayo okunceda abantu ukuba basebenzise isigama esigqibeleleyo esonyusa amathuba abo okufumana imisebenzi yabo yamaphupha.
I-Oxiracetam powder lukhetho kwakhona ukuphucula imemori kubantu abadala abasoloko benengxaki yokulahleka kwememori okanye yokwehla.
Kuba imizimba yethu ayivelisi i-oxiracetam iyodwa, ukuvuna izibonelelo ze-oxiracetam ngokuqinisekileyo uya kuqaphela ukuthenga kwe-oxiracetam kubathengisi abathembekileyo. ?????
Uninzi lophando lomntu lusekwe kubantu abadala kunye nabantu abangenampilo, kungoko uphando ngakumbi kubantu abasempilweni luya kuba yimfuneko ukuqinisekisa ukusetyenziswa kwe-oxiracetam. Nangona kunjalo, uphononongo lwe-oxiracetam lobuqu lubonisa amandla e-oxiracetam kubantu abasempilweni nabaselula.
I-Oxiracetam: Isebenza njani?
Ngelixa, izibonelelo ze-oxiracetam ziyaziwa kakuhle indlela yokusebenza ngayo ayikacaciswa gca. Nangona kunjalo, iindlela zokwenza i-oxiracetam zixeliwe.
Apha ngezantsi kukho ezinye zeendlela zokusebenza kwe-oxiracetam;
i. Ilawula i-neurotransmitter, i-acetylcholine
Ezi zimbini ze-neurotransmitters zidlala indima ebalulekileyo ekukwazini kwethu ukwenza imemori yexesha elifutshane kunye nexesha elide, ukufunda kunye nokusebenza kwengqondo ngokubanzi.
I-Oxiracetam inefuthe kwiinkqubo ze-cholinergic kunye ne-glutamate ngaloo ndlela zihlengahlengisa ukukhutshwa kwezi zinto zibalulekileyo ze-neurotransmitters, i-acetylcholine ACh kunye ne-glutamate.
Ngokukodwa, i-oxiracetam yonyusa ubuntununtunu be-acetylcholine receptors. Ikwenza oku ngokwandisa iprotein kinase C (PKC) enzyme echaphazela ii-receptors ze-M1 acetylcholine.
I-Oxiracetam nootropic ikwabonakalisiwe ukuba iyakwazi ukulungisa ii-receptors ezonakeleyo ke ngoko iqinisekisa amanqanaba aphezulu e-ACh enxulunyaniswa nomsebenzi wokuqonda.
ii. Iipropathi ezikhuthazayo
I-oxiracetam nootropics ibonelela ngeziphumo ezikhuthazayo ezinobulali kwinkqubo ephakathi yeemvakalelo.
I-Oxiracetam iwela kusapho lwe-ampakine yeekhompawundi. I-Ampakine yaziwa ngokubonisa iipropathi zokuvuselela. I-ampakine sisiyobisi esinefuthe kwi-glutamatergic AMPA receptors. Ngethamsanqa, ngokungafani nezinye izinto ezikhuthazayo ezinjenge-caffeine ekushiya ungalali kwaye ube novalo, i-ampakine ayikushiye neziphumo ebezingalunganga.
I-Oxiracetam ke ibonelela ngeziphumo ezikhuthazayo ezigcina unonophelo kwaye zigxile ngelixa ushiya ingqondo nomzimba uzolile kwaye ukhululekile.
Ukongeza, i-oxiracetam inokuphakamisa amanqanaba e-phosphates ene-eneji ephezulu edlala indima ekwandiseni amandla kunye ukuphucula ukugxila.
iii. Modareyitha inkqubo ye-glutamate
I-Oxiracetam ichaphazela inkqubo ye-glutamate kwaye emva koko ichaphazele ukukhutshwa kwe-neurotransmitter, glutamate. Inika iziphumo ezinamandla ngakumbi kunye nexesha elide.
I-Glutamate yenye yezona zinto zininzi ze-neurotransmitter kwinkqubo ye-neural ihlala ithumela imiqondiso kwingqondo nasemzimbeni wonke.
I-Glutamate idlala indima ebalulekileyo ekusebenzeni kwengqondo kwaye ngakumbi kwimemori nasekufundeni.
iv. Kwandisa unxibelelwano phakathi kwee-neurons
Olunye uphononongo lubonisa ukuba i-oxiracetam inyusa unxibelelwano phakathi kwe-neurons kwi-hippocampus. IHippocampus yinxalenye yengqondo echaphazela inkumbulo, iimvakalelo kunye nenkqubo ye-nerves ephakathi.
I-Oxiracetam ikufezekisa oku ngeendlela ezimbini. Inye kukukhuthaza ukukhutshwa kwe-D-aspartic acid kwaye okwesibini, ngokuchaphazela i-lipid metabolism. I-Lipid metabolism iqinisekisa ukuba kukho amandla awaneleyo okusebenza kwe-neurons.
Iziphumo zeAxiracetam kunye neziBonelelo
Kukho uluhlu olubanzi lwezibonelelo ze-oxiracetam ezichaziweyo nangona isongezelelo singavunyelwanga luLawulo lwezoKutya kunye noLawulo lweziyobisi (FDA).
Ngezantsi zilapha oxiracetam izibonelelo;
i. Yandisa inkumbulo kunye nokufunda
I-Oxiracetam ithandwa kakhulu ngenxa yokukwazi kwayo ukukhulisa inkumbulo. Iphucula ukuyilwa kwememori entsha kunye nokunyusa isantya apho ingqondo isebenza khona kwaye ikhumbula ulwazi.
I-Oxiracetam ikwanyusa inkumbulo ngokuphelisa ukonakala kwe-neuron, ukuphindisela i-lipid metabolism kwingqondo, ukonyusa ukuhamba kwegazi kunye nokuthintela ukwenziwa kwe-astrocyte.
Ukuhamba kwegazi kwindawo yobuchopho kubaluleke kakhulu ekuqinisekiseni ukuba ioksijini eyoneleyo ifika kwingqondo ukuze isebenze kakuhle ngengqondo kubandakanya inkumbulo.
Ukongeza, uxinzelelo lwe-oxidative lunokwenzeka ngenxa yezizathu ezininzi kwaye ukuba ukungalawuleki kunokuba neziphumo kumonakalo we-neuronal. Unyango lwe-Oxiracetam yiza uhlangulo ngokulungisa umonakalo weeuron.
Ukongeza, i-oxiracetam icetyiswa ukuba iphucule ukubakho kwexesha elide mhlawumbi ngenxa yokunyuka kokukhutshwa kwe-glutamate kunye ne-aspartic acid kwihippocampus.
Kuphononongo lwabantu abadala abangama-60 abanokwehla kwengqondo, idosi ye-oxiracetam ye-400 mg kathathu yonke imihla yafunyanwa ikhulisa imemori ngelixa kuncitshiswa iimpawu zokuhla kwengqondo.
Kwesinye isifundo sabantu abadala abangama-40 abanesifo sengqondo esixhalabisayo, i-oxiracetam kwi-2,400 mg imihla ngemihla ifunyenwe ukuphucula ixesha elifutshane inkumbulo kunye nokufunda ngokutyibilikayo.
ii. Ukunyusa ukujolisa kunye nokugxila
Xa ujongene nomsebenzi ofuna ukuhoywa ngokupheleleyo ixesha elide, i-oxiracetam inokuba lolona khetho lufanelekileyo. Ubomi besiqingatha se-oxiracetam malunga neeyure eziyi-8-10 kwaye kungoko unokunika izibonelelo ezide.
I-Oxiracetam inokukunceda ugxile emsebenzini ixesha elide ngaphandle kokuphulukana nengqwalaselo. I-Oxiracetam inxulumene nemveliso yamandla kwingqondo ngenxa yoko ibonelela ngamandla afunekayo kugxila emsebenzini ixesha elide kunye nokufunda izinto ezintsha ngokulula.
I-Oxiracetam ibonelela ngeziphumo ezikhuthazayo ezinobulali ezikunceda ukuba ugxile ngaphandle kokuphulukana nomdla kunye nengqwalaselo.
Kwizilingo ezimbini zabantu ezibandakanya abantu abadala abangama-96 abanesifo sengqondo esixhalabisayo kwaye enye ibandakanya abantu abangama-43 abanomsebenzi wokuncipha kwengqondo, ukuxhaswa kwe-oxiracetam kwafunyanwa ukuphucula ixesha lokuphendula kunye nokuqwalaselwa.
iii. Iziphumo ze-neuroprotective
Unyango lwe-Oxiracetam lunezibonelelo ze-neuroprotective njengoko lukwazi ukukhusela ukulimala kobume bobuchopho kunye nokwehla kwengqondo ngenxa yobudala okanye ukwenzakala kwengqondo.
I-Oxiracetam ke inokubonelela ngokukhusela kwingqondo kumonakalo obangelwe sisifo se-Alzheimer kunye nokunye ukuphazamiseka kwengqondo.
Izifundo ezininzi zezilwanyana zibonisa ukuba i-oxiracetam inokukhusela ubuchopho kumonakalo. Umzekelo, kuphononongo apho ii-neurotoxins zaziswa khona ukuze kuthintelwe ukwakheka kwememori njengokulimala kwengqondo okuqhelekileyo, unyango lwangaphambi kwe-oxiracetam kwafunyanwa ukuthintela i-neurotoxicity.
Izifundo ezithe kratya ziveze ukuba, unyango lwasemva kwe-oxiracetam lunokukhusela iigundane kwi-ischemic stroke ngokunciphisa ukungasebenzi kakuhle kwengqondo.
Kuphononongo lomntu lwezigulana ezili-140 eziphethwe yimivumbo ngenxa yoxinzelelo lwegazi (xi nzelelo), I-oxiracetam yenziwa kunye ukukhula kwentsholongwane (NGF). Olu nyango lufunyenwe lunceda ingqondo ukuba iphinde iphinde iphinde yonyuse ukusinda. Olu phando luye lwaxelwa ukunciphisa ukudumba kunye nokuphucula amandla emisipha ayimpawu zokubuyisela emva kokulimala kwengqondo.
iv. Ukuphucula ukuqonda kweemvakalelo
I-Oxiracetam ichaphazela indlela esizibona ngayo izinto ngokusebenzisa izivamvo ezintlanu zokubona, zokunuka, zokuchukumisa, zokuva kunye nokungcamla.
Xa uthatha i-oxiracetam yonyusa ukuhamba kwegazi lobuchopho elenza ukuba ingqondo ichonge ngcono kwaye iququzelele kwaye itolike esikubonayo.
Ukuphuculwa kokuqonda kweemvakalelo kuthetha ukuthatha izigqibo ezingcono ngendlela ezolileyo.
v. Uphucula ukuthetha ngokutyibilikayo
I-Oxiracetam ibonakalisiwe ekonyusa ukusebenza kwengqondo kwaye inokuphucula ukuthetha ngokutyibilikayo. Ukuthetha ngokutyibilikayo yenye yezinto ezinokukunceda ukuba ubuyise ulwazi kwimemori yakho.
Kuphononongo lwabantu abangama-73 abaphethwe sisifo sengqondo esixhalabisayo (MID) okanye isifo sengqondo esixhalabisayo (i-PDD), i-oxiracetam yafunyanwa ukuthintela ukwehla kwengqondo kunye nokuphucula amagama ngokutyibilika.
vi. Yandisa ukuphapha
Ukuhlala uvukile kwaye ujonge kubalulekile ekusebenzeni ngokukuko. I-Oxiracetam inikezela ngeziphumo ezikhuthazayo ezinokukunceda uhlale uphaphile ngokwandisa ukuhamba kwegazi kwingqondo.
Kuphononongo lwabantu abangama-289 abanesifo sengqondo esixhalabisayo, i-oxiracetam yafunyanwa ukuphucula imisebenzi yokuqonda. Kuye kwaxelwa ukuba kuphuculwe ukuphapha ngelixa kunciphisa uxinzelelo kunye novalo.
I-Oxiracetam Powder: Indlela yokulinganisa?
Ngokusekwe kuvavanyo lweklinikhi idosi ye-oxiracetam ecetyiswayo yi-750-1,500 mg ngosuku. Umthamo we-oxiracetam wahlulwe waba ngamayeza amabini athathwe kwakusasa nakusasa.
Kuya kufuneka uphephe ukuthatha isongezelelo se-oxiracetam ngokuhlwa njengoko ineziphumo ezikhuthazayo ezinokuthi ziphazamise ukulala kwakho.
Kuba i-oxiracetam inyibilikiswa ngamanzi inokuthathwa ngohlobo lwethebhulethi, icapsule okanye nokuba ngumgubo, nokuba unokutya.
Uphando lubonisa ukuba i-oxiracetam ithatha malunga neeyure ezingama-1-3 ukufikelela kwinqanaba lokuphakama kwi-serum kwaye kungoko kufuneka ithathwe iyure enye ngaphambi komsebenzi ekujongwe kuwo njengomsebenzi wokufunda. Ubomi besiqingatha se-oxiracetam malunga neeyure eziyi-8-10 kwaye kuya kufuneka ulindele ukufikelela kwintsebenzo ephezulu kwiveki.
Nangona kunjalo, ezinye izifundo zisebenzise iidosi eziphezulu ze-oxiracetam ukuya kuthi ga kwi-2,400 mg mihla le, zihlala ziqala ukusuka kumthamo ophantsi osebenzayo ukuya phezulu njengoko kufuneka.
Ukongeza, ekubeni i-oxiracetam inyusa ukusebenza kakuhle kwe-acetylcholine kwingqondo, qiniseka ukuyifaka ngomthombo olungileyo we-choline onje Alpha GPC okanye i-CDP choline. Oku kuya kukunceda uthintele iziphumo eziqhelekileyo ze-oxiracetam ngokukodwa iintloko ngenxa yokungonelanga kwe-choline kwingqondo.
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-Oxiracetam
I-Oxracetam nootropic ithathwa njengekhuselekileyo kwaye inyamezelwa kakuhle ngumzimba.
Nangona kunjalo, ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ze-oxiracetam ezixeliweyo zibandakanya;
Intloko- oku kwenzeka xa umntu elibele ukubeka i-oxiracetam ngomthombo olungileyo we-choline. Intloko yenzeka ngenxa yokungonelanga kwe-choline kwingqondo. Oku kunokuthintelwa ngokuthatha isitaki se-oxiracetam ngomthombo we-choline onje ngeAlpha GPC.
Ukuphuthelwa kunye nokungazinzi kunqabile kakhulu ziziphumo ebezingalindelekanga ze-oxiracetam. Bayachazwa xa umntu ethatha idosi ephezulu ngokungaqhelekanga ye-oxiracetam okanye ethatha isongezelelo ngokuhlwa. Ukulwa nale miphumo ye-oxiracetam, soloko uthabatha umyinge okhuthazwayo kwaye wenze umkhuba ukuthatha i-oxiracetam ngaphambi kwemini ukukhusela ukuphazamiseka kokulala.
Ezinye iziphumo ezinokubakho ze-oxiracetam zibandakanya;
Urhudo okanye ukuqhina, kunye
I-Oxiracetam powder isebenza ngokugqwesileyo ukuphucula ukuqonda kunye nokukhuthaza inkqubo ye-nervous system yodwa okanye ngokudibanisa nezinye izongezo.
-oxiracetam Alpha GPC isitaki
Njengazo zonke iiracetam, isitaki seOxiracetam esinomthombo we-choline kubaluleke kakhulu. Ukuyigcina nge-Alpha GPC ayisiyonyusi kuphela imiphumo yayo kodwa ikwanceda nokuthintela ukwenzeka kweentloko ikakhulu ezinxulumene nokusilela kwe-choline kwingqondo.
I-oxiracetam alpha GPC yokulinganisa umthamo iya kuba yi-750 mg ye-oxiracetam kunye ne-150-300 mg ye-Alpha GPC ethathwe ngeedosi ezimbini, kusasa nasemva kwemini.
-oxiracetam noopept isitaki
I-Noopept yenye yezona nootropics zibalaseleyo ezaziwayo ukuphucula umsebenzi wokuqonda kunye nokusebenza ngokufana kakhulu neeracetam.
Xa ubeka i-oxiracetam nge noopept, ulindele ukufumana amava okuqonda ngakumbi kubandakanya, inkumbulo, ukufunda, ukuphaphama, ukukhuthaza kunye nokugxila.
Umthamo osemgangathweni wale stack ungaba yi-750 mg ye-oxiracetam kunye ne-10-30 mg ye-noopept, ethathwa yonke imihla.
-unifiram oxiracetam isitaki
I-Unifiram yinkompo ye-nootropic ethathwe ukuphucula ukuqonda kunye nolwakhiwo lweekhemikhali olufanayo nolo lwee-racetams. Nangona kunjalo, iimvavanyo zeklinikhi ziyasilela kwaye oku kwenza ukuba kube nzima ukuxelela ukuba yeyiphi eya kuthi gingci kakuhle kuyo.
Kodwa kwakhona, kuba isebenza ngokufanayo kwii-racetams, isitaki se-unifiram esinee-racetams kubandakanya i-oxiracetam inokubangela ukuba kuphuculwe ukusebenza kwengqondo. Kubonakalisiwe ukuba kunamandla ngakumbi kunobuhlanga, yiyo loo nto iidosi eziphantsi kakhulu ziya kufuneka ukufezekisa iziphumo.
Ngokusekwe kwi-unifiram yobuqu kunye namava e-oxiracetam idosi kufuneka ibe yi-5-10 mg ye-unifiram kunye ne-750 mg ye-oxiracetam ethathwe yonke imihla.
-Oxiracetam kunye nePramiracetam Stack
I-Oxiracetam ibeka kakuhle ezinye iiracetam.
Xa usebenzisa i-oxiracetam stack kunye pramiracetam, Umsebenzi wokuqonda inkumbulo, ukugxila kunye nenkuthazo inyuswe kakhulu kwaye imveliso yakho inokunyuka.
Iziphumo ezikhuthazayo ze-oxiracetam zikwonyuswe ngokwenyusa ukuphaphama kunye noxinzelelo ngenxa yokuphuculwa kwamandla engqondo.
Umthamo ocetyiswayo wale mfumba yi-750 mg ye-oxiracetam kunye ne-300 mg ye-pramiracetam ethathwa kanye yonke imihla. I-Oxiracetam inokuthathwa isisu esingenanto ukusukela oko inyibilikiswa ngamanzi ngelixa ipramiracetam inokufakwa kwisidlo sokuqala kuba sisongezo esinyibilikayo esinamafutha.
Uyithenga phi i-oxiracetam
I-Oxiracetam nootropic ifumaneka ngokulula kwi-Intanethi. Ukuba ucinga ukuthatha i-oxiracetam yithenge kwabona bathengisi be-nootropic bahloniphekileyo kwi-intanethi. Cinga ukufundisisa ngononophelo malunga nomgubo othile we-oxiracetam, iifomsile okanye ifom yeethebhulethi.
Ukujonga amava e-oxiracetam ekwabelwana ngawo kwiiwebhusayithi zenkampani yenye yeendlela zokuqinisekisa ukuba uyayifumana into oyifunayo.
Uphengululo lweOxiracetam kwindawo yabathengisi yindawo evula amehlo yeyona oxiracetam nootropics ilungileyo kuba ayingabo bonke abaya kubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu.
IDysken, MW, Katz, R., Stallone, F., kunye neKuskowski, M. (1989). I-Oxiracetam kunyango lwe-dementia ye-infarct kunye nesifo sengqondo esixhalabisayo. Ijenali ye-neuropsychiatry kunye neeklinikhi ze-neuroscience, 1(3), 249-252.
UHlinák Z, uKrejcí I. (2005). I-Oxiracetam ngaphambi- kodwa hayi kunyango lwasemva kuthintele ukusilela koluntu ekuvelisweni nge-trimethyltin kwiigundane.
UHuang L, uShang E, uFan W, uLi X, uLi B, yena uS, uFu Y, uZhang Y, uLi Y, uFang W. (2017). I-S-oxiracetam ikhusela ngokuchasene ne-ischemic stroke ngokudambisa ukungasebenzi kakuhle kwegazi kwiigundane Eur J Pharm Sci.
Maina, G., Fiori, L., Torta, R., Fagiani, MB, Ravizza, L., Bonavita, E., Ghiazza, B., Teruzzi, F., Zagnoni, PG, kunye neFerrario, E. (1989 ). I-Oxiracetam kunyango lwesifo sengqondo esixhalabisayo esisisiseko esichaphazelayo kunye nesininzi esineempawu ezingafaniyo: isifundo esilawulwa yimfama, esilawulwa yi-placebo. I-Neuropsychobiology, 21(3), 141-145.
IRozzini R, iZanetti O, iBianchetti A. (1992). Ukusebenza kwonyango lwe-oxiracetam kunyango lokusilela kokuqonda okukuqala kwesifo sengqondo esixhalabisayo. IActa Neurol (Napoli).
Ilanga, Y., Xu, B., kunye noZhang, Q. (2018). Ukukhula kwamathambo ngokudibanisa ne-Oxiracetam kunyango lweHypertensive Cerebral Hemorrhage. Ijenali yasePakistan yesayensi yezonyango, 34(1), 73-77.
1 Yintoni iOxiracetam?
2.Oxiracetam powder: Yintoni i-Oxiracetam esetyenzisiweyo?
3.Oxiracetam: Isebenza njani?
Iimpembelelo zeOxiracetam kunye nezibonelelo
5.Oxiracetam Powder: Indlela yokulinganisa?
6.Iziphumo ebezingalindelekanga zeOxiracetam
8.Uphi ukuthenga i-oxiracetam